महिलाले बजाउछन् नौमती बाजा |
महिलाले बजाउछन् नौमती बाजा
प्रकाशित मिति :2017-12-24 12:03:58
नवलपरासी । संस्कार र परम्पराका नाममा यदि मान्छे मान्छेबिच विभेद हुन्छ । कुनै पनि काम गर्न छेकवार लगाइन्छ भने त्यो संस्कार र परम्पराले समाजको हित भन्दा बढी अहित गरिरहेका हुन्छन् । मान्छे मान्छेबिच विभाजन कोरिदिएका हुन्छन् । त्यसकारण त्यस्ता संस्कार र परम्पराहरू परिमार्जन गर्नैपर्छ, तोड्नैपर्छ ।
परिवर्तन गर्न धेरै मान्छे हुनुपर्दैन पर्दैन । एक जना वा दुई चार जनाबाटै परिवर्तनको सुरुवात हुन्छ । त्यसका लागि साहस बटुल्नुपर्छ । साहसले असम्भव मानिएका कुरालाई सहजै सम्भव पनि तुल्याइदिन्छ । यसको उदाहरण बनेका छन्, गैडाकोटका महिलाहरू । महिलाले गर्नु हुदैन, महिलाले गर्न सक्दैनन् र जान्दैनन् भन्नेहरूका लागि गतिलो पाठ समेत बनेका छन् ।
गैडाकोट २ न्यायचोककी ३५ वर्षीया राधा थापा विभिन्न सभा समारोह, विवाह ब्रतबन्धहरूमा आफ्नो नौमती बाजा समूहमा बाजा बजाउने र नाच्ने गाउने गरेर हिड्न लागेको ४ वर्ष भयो । यतिबेला उनको मुख्य पेसा नै बाजा बजाउनु हो । उनी अहिले बाजा, झ्याली, टेङको र ढोलकी बजाउने गर्छिन् ।
सुरुका दिनमा बजाउन सिक्नका लागि धेरै गाह्रो भएको भए पनि हिम्मत नहारिकन मनमा दृढ संकल्पका साथ जसरी पनि सिक्नुपर्छ भनेर नै बजाउन सिकेको र सफल पनि भएको उनले बताइन् । ‘सुरुमा त धेरै नै गाह्रो भयो । सक्दिन कि भन्ने पनि लाग्यो । तर पनि मैले हिम्मत हारिन आखिर सिकेरै छोडे’ थापाले भनिन् ।
बाजा बजाउने काम पुरुषहरूले मात्रै गर्छन् भन्ने समाजको बुझाइ चिर्न उनलाई त्यति सजिलो भने थिएन । घर परिवारले साथ नदिएको भए उनले यस काममा सफलता पनि प्राप्त गर्ने थिइनन् । ‘कतिपय आफन्त र समाजका व्यक्तीले नराम्रो दृष्टिले पनि हेरे । अनेकथरी कुरा सुनाए । तर मेरो घर परिवारले मलाई कहिल्यै रोकतोक गरेनन् । बरु हौसला प्रदान गरे । जसले गर्दा म आज यहाँसम्म आइपुगेको छु’ थापाले महिला खबरसँग भनिन् ।
राधा गैडाकोटमा रहेको मौलाकालीका दर्लामी नौमती बाजा समूहमा आबद्ध छन् । उनीसँगै यस समूहमा अन्य महिलाहरू समेत काम गर्छन् । ती सबै महिलाहरूले बाजा बजाउने, नाच्ने गाउने गर्छन् । सिजनको समयमा दिनहुँ जसो काममा हिड्नुपर्छ । उनीहरूलाई अफसिजनमा भने घरको काममै व्यस्त हुन्छन् ।
राधा भन्छिन्, ‘कला संस्कृतीको संरक्षणमा महिलाले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मेरो सोचाई हो । एकातिर कला संस्कृती संरक्षण हुने, अर्कोतर्फ आम्दानी समेत हुने । साथै कला, संस्कृति मान्न र संरक्षण गर्ने हक महलिा र पुरुष सबैलाई छ भन्ने देखाउनका लागि पनि मैले यस कामलाई रोजेकी हुँ’।
पछिल्लो समय अधिकांश पुरुषहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने र भएका पनि अन्य काम गर्न रुचाउने हुँदा पनि महिलाहरूले यस पेसालाई अगाडि बढाउनु पर्ने समय आएको थापाको भनाइ छ ।
थापालाई नौमतीका यी ४ थरी बाजा बजाएर मात्रै सिमित हुन मन छैन । नौमतीमा सबैभन्दा बजाउन गाह्रो हुने सनहि बाजा बजाउने धोको छ । सबै बाजा बजाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उनको मनमा छ । ‘सबैभन्दा गाह्रो सनहि हुन्छ, किनकी त्यो सासले बजाउन पर्छ । तर पनि सिक्दै छु कुनै दिन अवश्य बजाउछु’ थापाले दृढता व्यक्त गरिन् ।
२१ वर्षकी मिना थापा मगर पनि यसै संस्थामा आबद्ध सदस्य हुन् । सानै उमेरमा पनि उनले समूहमा आबद्ध भएर बाजा बजाउन सिकिन् । अब यहि पेसालाई निरन्तरता दिने उनी बताउँछिन् । ‘म ४ महिना जती भयो समूहमा आबद्ध भएको अहिले बाजा र झ्याली बजाउछु अनि नाच्ने गाउने गर्छु’ उनले भनिन् । अरु बाचा पनि बजाउन सिक्दै सिक्दै गरेको उनले बताइन् ।
पहिले घरमै बाजा बजाउन सिकेकी मिनालाई पनि सबै थरी बाजा बजाउन मन छ । घरमै बाजेहरूसँग बाजा बजाउन सिकेर समूहमा आएकी उनी अहिले दुईथरी मात्रै बाजा बजाउछिन् । ‘सबै बाजा बजाउन मन छ, सिक्दै छु’ थापाले भनिन् ।
बाजा समूहमा आबद्ध भएका महिलाहरूलाई समूहका अन्य पुरुष सदस्यहरूले समेत हौसला प्रदान गर्ने गर्दछन् । ‘समूहमा रहेका दाजुहरूले पनि धेरै हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ । जान्दिन होला भन्यो भने किन नजान्ने हो र ? सिकेपछि सबै जानिन्छ भनेर सिकाउँनुहुन्छ । धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ’ थापाले भनिन् ।
समूहमा युवा उमेरका महिलामात्रै होईन आधि उमेर काटिसकेकी चन्द्रकला थापा पनि आबद्ध छन् । ५० वर्षकी उनी दुई वर्षदेखि समूहमा आबद्ध भएकी हुन् । उनले पनि बाजा, झ्याली, ढोलकी बजाउछिन् । नाच्न गाउन खुम रुचाउने चन्द्रकला सुरुमा रमाईलोका लागि समूहमा आबद्ध भएको भए पनि अहिले आम्दानी गर्ने माध्यम बनेको बताउँछिन् । सिजनमा त राम्रै आम्दानी समेत हुने उनले बताइन् । नाच्न गाउँन र बजाउनलाई उमेरले नछेक्ने उनी बताउँछिन् । ‘आफूभित्र रहको कला प्रस्तुत गर्न उमेरले कहा छेक्छ र ? आफ्नो शरीरले सकुन्जेलसम्म काम गर्छु । घरमै बसेर के हुन्छ र ? समूहमा हिडेपछि साथीहरूसँग रमाईलो पनि हुन्छ । आम्दानी पनि हुन्छ, आफ्नो कला पनि सबैलाई देखाउन पाइन्छ’ चन्द्रकलाले भनिन् ।